Uk Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu xikumay 23 sano oo Xarig ah +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Uk Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu xikumay 23 sano oo Xarig ah +Sawirro
Maxkamadda magaaladda Bristol ee dalka Britain ayaa lasoo taagay sadex wiil oo Soomaali ah , waxaana dhalinyaradaan lagu soo eedeeyay in ay ku xadgudbeen sidoo kale dhibaateeyeen gabdho yar yar.
Dhalinyaradan Maxkamada lasoo taagay ayaa lagu eedeeyay in a katirsan yihiin koox isku xiran oo geesata dhibaatooyin isugu jira kufsi, tahriibinta gabdhaha yar yar iyo dhibaatooyin kale oo dumarka ka dhan ah.
Sadexdan Dhalinyaro ayaa lagu soo oogay 14 fal dambiyeed ay kula kaceen afar gabdhood oo la sheegay in ay da’dooda ka hooseesay 14 sano jir, garsooraha Maxkamadda Bristol, Peter Blair ayaa ugu dambeyn dhalinyaradan ku riday xukuno adag oo xabsi ah.
Dhalinyaradan Soomaaliyeed ee xukunka lagu riday ayaa kala ah Zakariya Sheekh oo 23-jir ah, waxaa lagu riday 16 sano oo xabsi ah, Mohamed Dahir oo 24-jir ah iyo C/rashiid C/llaahi oo 23-jir ayaa iyagana midkiiba lagu riay min 8 sano oo xabsi ah.
Dhageesiga Dacwada dhalinyaradan ayaa socotay 49 maalmood, waxaana ugu dambeyn Maxkamada ay ku riday xukuno adag oo xabsi ah, waxaana dhalinyaradan qeyb ka noqonayaan dhalinyaro badan oo ku xiran xabsiyada dalka Britain.